Bahlaze iqiniso ababulale isihlobo - Ilanga News
Home Izindaba Bahlaze iqiniso ababulale isihlobo
Bahlaze iqiniso ababulale isihlobo
Unina uthi indodana yakhe yanyamalala kuyiwa ececemi
BABHADLA esitokisini umshana noninalume basoYaya, eShowe ababoshwe mayelana nokufa kwesihlobo sabo.
BABHADLA esitokisini umshana noninalume basoYaya, eShowe ababoshwe ngeledlule mayelana nokufa kwesihlobo sabo esagcina ukubonakala kuyiwa ececeni lesinye isihlobo sabo mhla ka-15 kuZibandlela (December) wonyaka odlule, kanti kuvela ukuthi bamyisa kwagoqanyawo isidumbu basiphosa emfuleni uThukela.
Abasolwa ILANGA elinawo amagama abo kodwa elingeke liwadalule baze bavume noma baphike icala kuthiwa balihlanza lonke iqiniso enduneni yendawo, uMnu Mqambeni Nzuza, ngaphambi kokuba baboshwe ngeledlule.
Kuthiwa babekhala ngokuthi kabasabuthi quthu ubuthongo umufi, uMnu Buyani Dludla (26), akabanike thuba, ubafikela ebusuku belele abaphoqe ukuba bakhulume iqiniso ukuthi basilahlaphi isidumbu sakhe.
Unina kamufi, uNkz Thandiwe Msomi, waseMathonsi, eMbongolwane, khona eShowe, uthi indodana yakhe yanyamalala kuyiwa ececeni lesinye isihlobo sakhe.
“Obekusikhathaza siwumndeni bekuwuthi uma sibuza ezihlotsheni obekunomcimbi kuzona ukuthi waphelelaphi uBuyani, bezisitshela ukuthi wahamba ntambama eseqiwe yizinkamba zikaFaro, kazimazi ukuthi waphelelaphi.
“Ithumba lize labhoboka ngesikhathi ingane kamzala wami eyayikhona kuyolahlwa isidumbu, itshela induna ngakho konke okwenzeka. Yize uBuyani ebephuza kodwa wayengeyena umntwana oyisixhwanguxhwangu,” kusho uNkz Msomi.
Uthi sekuphele inyanga indodana yakhe ingatholakali, usekhalela ukuthi kutholakale ithambo layo. Uthi indaba yokuthi izihlobo zakhe ziyathinteka ifike kubona nenduna yabo, uMnu Alfred Mabaso, ebatshele ukuthi ibihlangene noMnu Nzuza oyitshele ukuthi kunabafana basezihlotsheni zakhe ababili asebeboshiwe emuva kokuhlanza iqiniso ngokunyamalala kwendodana yakhe.
“Sikhathazekile siwumndeni ngoba isidumbu kasikasitholi. Lokhu abasitshela khona asikukholwa, siyokholwa mhla basikhombisa la basilahla khona isidumbu sendodana yami,” esho.
UMnu Nzuza ukuqinisekisile kwiLANGA ukuthi abasolwa balikhulume kuyena lonke iqiniso ngabakwenza kumufi.
“Bengingakutholi ukuphumula selokhu ngabikelwa ngendaba yokunyamalala kwalo mfana. Ngibe sengihlela ukuthi ngibabize laba bafana bakulo muzi okwakunomcimbi kuwona ukuze bazongichazela kahle ukuthi kwenzekani ngosuku lomcimbi.
“Kangizange ngibaphose nemibuzo, bazikhulumele bona lonke iqiniso, basho ukuthi omunye wabo (umalume) waxabana nomufi, wamshaya waze washona. Kwathi uma ebona ukuthi usenze umonakalo, wacela umshana wakhe ukuba amsize ambambise isidumbu bayosilahla.
“Okungimangazile ngesikhathi ngikhuluma nalaba bafana, ngithole ukuthi umndeni wonke wakubo ubulwazi lolu daba, kodwa wakhetha ukulufihla. Ngemuva kokuba umshana noninalume sebezivumele, ngibize amaphoyisa ababopha.
“Abasolwa baboshwe bengakasikhombisi ukuthi basiphosa kuphi noThukela isidumbu. Okunye okuyinkinga esibhekene nakho wukuthi kusazoba nzima ukuthi sisithole isidumbu njengoba umfula uThukela umkhulu kangaka,” kusho uMnu Nzuza.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, ukuqinisekisile ukuboshwa kwabasolwa ababili abahlobene nomufi, wathi bavelile eNkantolo yeMantshi yaseShowe ngeledlule, kulindeleke ukuba baphinde bavele khona maduze.
Previous articleAbazali bakhala ngomfaniswano “omba eqolo”
Next articleUHunt unengekile behlulwa yiPirates